नैतिकता र संस्कार नभएका देउवाले राजनीति नगरे हुन्छ : शेखर कोइराला | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ जेष्ठ ८ बुधबार, ०३:१२
२०७५ फाल्गुन १० गते प्रकाशित, l १०:१०
कांग्रेस कमजोर बन्दै गएको छ । किन सुधार भएन ?
कांग्रेस कमजोर भएको कुरामा त दुई मत नै भएन । सुधार गर्ने काम त नेतृत्वको हो । पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्यो । म त केन्द्रिय सदस्य मात्रै हुँ ।
तपाई र सभापति शेरबहादुरजीबीच किन विवाद भयो ?
मलाई यो विषयमा थाहा छैन । म त राजनीतिक संस्कार बोकेको परिवारको मानिस हुँ । म विवादित कुराहरु बोल्दिन । सभापतिजीले किन त्यस्तो भन्नुभयो त्यो म जान्दिन । ममाथि उहाँ किन खनिनुभयो त्यो उहाँलाई नै सोध्नुस् ।
तपाई, शशांक र सुजाताले एउटै माला लगाइसकेपछि देउवाको कोइराला परिवारविरुद्धमा जस्तो देखिने अभिव्यक्ति आयो । अब तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
म एउटा राजनीतिक परिवारबाट आएको व्यक्ति, मसँग संस्कार र नैतिकता छ । राजनीतिमा संस्कार र नैतिकता नभएको व्यक्तिले राजनीति नगरे हुन्छ । नैतिकता र संस्कारबिना राजनीति हुँदैन । उहाँले किन त्यस्ता कुरा गर्नुभयो, त्यो विषयमा उहाँलाई नै सोध्नुस् । मेरो संस्कारले कसैलाई केही भन्न दिदैन । उहाँको संस्कार त्यही होला । बोल्न दिनुस् ।
देउवासँग तपाईको व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ ?
उहाँ आदरणीय सभापति हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा कुनै समस्या छैन । उहाँले किन त्यस्तो भन्नुभयो ? म केही जान्दिन ।
सभापति देउवामाथि शेखरको हमला, अब सभापति बन्न नदिने घोषणा (भिडियो)
डा. कोइरालाले मागे तीन जनाको राजिनामा, हेर्नुस् कोको परे
शेखर कोइरालाको दाबी : भारतसँग कांग्रेसको सम्बन्ध बिग्रिएको छैन (भिडियोसहित)
शेखरको प्रश्न : दुई तिहाइको सरकार पनि कति निरिह हो ?